ESI TINYE GOOGLE CHROME NA KỌMPUTA GỊ N'EFU - GOOGLE CHROME - 2020
Wụnye Google Chrome na kọmputa gị
Ịmepụta akwụkwọ ndị na-adọrọ mmasị na Instagram, a ghaghị ịkwụ ụgwọ dị oke mkpa ọ bụghị nanị na ederede ederede, kamakwa iji mepụta ya. Otu n'ime ụzọ ị ga-esi gbanwee nkọwa ahụ na profaịlụ ma ọ bụ n'okpuru akwụkwọ a - bụ ịmepụta ihe odide.
Mepụta akara ederede na Instagram
Ọ bụrụ na ị na-agbaso ndị na-ede blọgụ na-ewu ewu na Instagram, ị nwere ike chọpụta ihe karịrị otu ugboro n'iji ya eme ihe, nke enwere ike iji, dịka ọmụmaatụ, iji kọwaa echiche. Ide ihe yiri nke ahụ na Instagram nwere ike ime n'ụzọ dịgasị iche iche.
Nzọụkwụ 1: Ewelite
Ụzọ kachasị mfe iji mezuo ihe a choro bụ site na ọrụ ntanetị nke Ịntanetị, nke ị nwere ike iji ma na kọmputa ma na smartphone.
Gaa na weebụsaịtị Renotes
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ Renote na ihe nchọgharị ọ bụla. Na igbe ndenye, tinye ederede.
Ozugbo a, otu ihe ndekọ ahụ ga-apụta, mana ị gafere. Họrọ ya ma detuo ya na desktọọpụ.
Ihe niile dị ugbu a maka gị bụ ịmalite Instagram na mado nke ederede ederede na mbụ maka nkọwa ahụ, na ikwu ma ọ bụ na ozi ahụ na profaịlụ gị.
Na ngwa ngwa ngwa ihe ndekọ ahụ ga - ele anya dị ka ndị a:
Usoro 2: Spectrox
Ozi ọzọ n'Ịntanet nke na-enye gị ohere ịmepụta ederede pụtara ìhè ma jiri ya na Instagram.
Gaa na weebụsaịtị Spectrox
Soro njikọ n'elu. Na kọlụm dị n'aka ekpe, ị ga-abanye koodu ntinye, wee pịa akara akara.
Oge ọzọ na aka nri ị ga-ahụ nsonazụ a rụchara. Detuo ya ma jiri ya na netwọk mmekọrịta.
Usoro 3: Nchịkọta Ihe
Usoro a ga-enye gị ohere ịdebanye aha ederede pụtara kpọmkwem na Instagram na kọmputa gị. Nanị ihe ị chọrọ bụ idetuo àgwà pụrụ iche ma jiri ya na Instagram mgbe ịdere nkọwa ma ọ bụ nkọwa.
Gaa na saịtị Instagram
Mbụ ị ga-emepe usoro ihe omume akara ngosi na kọmputa gị. Iji chọta ya, jiri nyocha Windows.
Achọpụtara agwa dị n'okpuru nọmba ahụ 0336. Mgbe ịchọtara ya, họrọ otu igodo sourut, pịa bọtịnụ ahụ "Họrọ"na mgbe ahụ "Detuo".
Gaa na saịtị Instagram. Mgbe ị na-ederede ederede, kpochaa otu agwa site na clipboard, wee dee akwụkwọ ozi. A ga-agafe akwụkwọ ozi ahụ. Mgbe ahụ n'otu ụzọ ahụ, tinye akara ahụ ọzọ site na ịde akwụkwọ na-esonụ. Ya mere kwuchaa ederede ahịrịokwu ahụ.
E nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ dị n'ịntanetị na ngwa ndị ị nwere ike ịmepụta ederede pụtara maka Instagram. N'isiokwu anyị, ndị kachasị ewu ewu ma dị mfe iji.
https://termotools.com ig.termotools.com © Google Chrome 2020